40 Mfm minamato manzwi Ekukura kweMweya | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 40 Mfm minamato mapoinzi Ekukura kweMweya
40 Mfm minamato mapoinzi Ekukura kweMweya
Sezvakangoita mucheche wese anofanira kuramba achikura kuti ave munhu mukuru, mwana wega wega Mwari anofanira kukura mumweya kuti ave muKristu akakura mune zvokunamata. Pane nzira mbiri dzinokurisa muKristu, ndidzo: Ishoko, uye minamato. Nhasi takasanganisa makumi mana emunamato mapoinzi ekukura pamweya. Iyi mfm minamato mapoinzi anofuridzirwa naDr Olukoya wegomo remoto uye hushumiri zvishamiso. Munamato inzira yechokwadi yekuvaka mhasuru dzemweya. Patinonamata tinopa kuti mweya mutsvene ushande matiri uye matiri. Muna Ruka 40: 18 Jesu akatidzidzisa kunyengetera nguva dzose uye kwete kupera simba.
izvi mfm munamato mapoinzi kukura kwemweya kuchakupa simba kuti ukure pamweya. Izvi zvinowedzera moyo wako wekunamatira, uye zvichawedzera kusimba kwako mumweya. Rangarira zvinotora minamato kuti tikunde miyedzo uye nemiedzo mizhinji yatinokunda, ndipo patinowedzera kukura kuva mukusimba kwemweya. Uri kuona kusasimba muhupenyu hwako hwechiKristu here? Namata, uri kushaya njere uye kutungamirirwa? Namata. Munamato ndiyo kiyi yechokwadi yekuwana chero chinhu muumambo. Munamato ndiyo kiyi yekukura kwemweya. Sezvo iwe uchinamata iyi minamato nhasi ini ndinoona hwako hwehupenyu hwechiKirisitu hunowanda marefu munzvimbo dzaJesu zita amen.
40 mfm minamato mapoinzi ekukura pamweya.
1.HaIshe, ndipeiwo simba rekunamata kuti ndiite mushoko renyu muzita raJesu.
2.HaIshe, ndisimudze mufambiro wangu newe, sevanhu vanoona mabasa ako akanaka muhupenyu hwangu uye varumbidze zita rako muzita raJesu
3.We Ishe, ndisimbise mushoko rako, shoko rako riite michero muhupenyu hwangu muzita raJesu
4. Mwari werugare, tsaura neshoko rako, nekuti izwi rako ichokwadi.
5. Baba Ishe, muviri wangu, mweya pamwe nemweya ngazvichengetedzwe zvisina mhosva pakuuya kwaIshe wedu Jesu Kristu, muzita raJesu.
6. Rega ndigozadzwa kuti ndiite kuti ndizadziswe nezivo yeshoko renyu sezvo mvura ichifukidza iwo anoona muzita raJesu.
7. Oh ishe, ndipeiwo nemweya wehungwaru uye nekunzwisisa kwemweya kuti ndinzwisise chokwadi chakaoma mushoko renyu muzita raJesu.
8. Baba Ishe, ndibatsireiwo kufamba mune chimiro chenyu, vanhu ngavaone Kristu mandiri zuva nezuva, muzita raJesu.
9. Baba Tenzi, ndiitei kuti ndibereke mumabasa ose akanaka, muzita raJesu.
10.OIshe, ndibhabhatidzei nemweya wekuteterera, wedzera hupenyu hwangu hwekunamata muzita raJesu.
11.O Ishe, ndisimbisei nesimba mumunhu wangu wemukati muzita raJesu.
12.Funga Ishe, rega ndizadziswe nesimba remweya wako mukufamba kwangu newe muzita raJesu.
13.Tenzi Tenzi, meso esimba rangu ngavhenekeswe, muzita raJesu.
14.To ishe, nditenderei kusimbiswa nesimba neMweya wake mumunhu wemukati, muzita raJesu.
15. Baba Tenzi, regai Kristu agare mumoyo mangu nekutenda, uye rega rudo rwaKristu mandiri ruve nezvibereko nezita raJesu.
16. Baba Tenzi, regai ndidzike midzi uye ndigadzika murudo rwaKristu, muzita raJesu.
17.Haiwa Jehovha, regai ndizadziswe nokuzara kuzere kwaMwari.
18.Mwari, ndibatsireiwo kunzwisisa upamhi, kureba, kudzika nekukwirira kwerudo rwaJesu Kristu uye ndiitei kuti ndifambe murudo irwo mazuva ese muzita raJesu.
19.Izwi raIshe ngarive nemahara uye rikudzwe mandiri, muzita raJesu.
20. Oh Lord of Peace, ndipeiwo rugare munzvimbo dzese dzehupenyu, muzita raJesu.
21.Kutaurwe kunofanira kupihwa kwandiri kuti ndizivise chakavanzika cheVhangeri raJesu Kristu muzita raJesu.
22.O, Ishe, zvakakwana izvo zvinoshayikwa muhupenyu hwangu, simba renyu ngarirambe riratidzwe mukusasimba kwangu.
23.Haiwa Jehovha, rongai kuronga nezano renyu mandiri.
24.OIshe, ndiitirwe basa rako, uve wakakwana pabasa rose rakanaka.
25.O Ishe, ndipfumise nehungwaru huchenjeri pane zvese kutaura neruzivo.
26 Nyasha dzaIshe Jesu ngadzive neni, muzita raJesu.
27.Father Lord, jekiseni mandiri mavitamini emweya kubva mushoko renyu (mukaka wemweya) unozoita kuti ndive noutano hwakanaka pamweya, muzita raJesu.
28.Tovera Ishe, pinza mandiri mavhitamhepo emweya ayo anozowedzera chishuwo changu kuti ndidzidze Izwi rako zvinowedzera, muzita raJesu.
29.Tora Ishe, ndipeiwo nzara yemweya isingadzivikanwe uye nyota yekukutevererai semabhurugwa anodikanwa mushure memvura muzita raJesu.
30.Rega Mwari andipinze mavitamini emweya anozobvisa chiratidzo changu uye asimbise kujekeseka kwawo, muzita raJesu.
31.Mwari Mwari, musandiperekedze mumiedzo uye mundinunure pane zvakaipa zvese mukufamba kwangu kwechiKristu munaJesu zita.
32.Haiwa Mwari, ndinozivisa kuti mukufamba kwangu kwechiKristu, ndichave noutano hwakanaka munaMwari muzita raJesu.
33.Mwari Mwari, ndipeiwo simba risina simba mukutsvaga kwangu basa raJesu muzita raJesu.
34.Mwari Mwari, ndipeiwo nyama yakasimba yeshoko renyu kuti ikurumidze kukura pamweya muzita raJesu.
35.Rumbidzai Mwari, simba rangu kumhanya nhangemutange yakaiswa pamberi pangu kusvika kumagumo muzita raJesu.
36. Ndinogashira kuzodzwa kunonyaradza uye nemweya muMweya Mutsvene, muzita raJesu.
37. Baba, regai rudo rwa Kristu ruyerere kubva kwandiri riende kune vamwe pasirese muzita raJesu.
38. Baba, nenhoo yekutenda, ndinodzima miseve yose yakaipa yakanangiswa kwandiri nemuvengi muzita raJesu.
39. Ini ndinomhanyira muzita raIshe iro rine shongwe yakasimba uye ini ndakachengeteka, muzita raJesu.
40. Fungidzai Tenzi, ndinokutendai nekupa simba hupenyu hwangu hweMweya kuti vakwire kumusoro muZita raJesu.
Previous nyayaKutsanya uye Munamato wekununurwa kweNigeria
inotevera60 mfm minamato inongedza inopesana nemweya wekubereka
David Ndowa Kurume 29, 2019 At 8:26 pm
Ini ndinoda izwi raMwari uye ndinorinzwisisa zvizere
. Ini ndinogara ndichikurudzirwa kuti ndinamate nguva dzose nechirongwa ichi.
samson folorunsho Chikumi 4, 2021 Panguva ya6: 14 pm
hukuru uye hunyanzvi
Simba hukama hwekunamatira minamato
Kunamata Zvidimbu Zve Ushingi Kana Iwe Uchitya
PISAREMA 136 Mharidzo Vhesi By Vesi